सरकारले माग्यो अस्पतालसँग तथ्यांक - NepalTimes
काठमाडौं सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप प्रभावकारिता सन्दर्भमा अस्पतालसँग तथ्यांक मागेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार अस्पतालसँग खोप लगाएका र नलगाएकाको विस्तृत तथ्यांक माग गरिएको हो ।
‘अस्पतालमा मृत्यु, भर्ना, परीक्षण गरेर कोरोना पोजेटिभ आए–नआएकाले खोप लगाएको वा नलगाएको रिपोर्ट माग गरेका छौं,’ डा. तारानाथ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि विस्तृत विवरण थाहा होला ।’ उनले प्राप्त जानकारीको हवाला दिँदै खोप नलगाएकाको मृत्युदर अत्यधिक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले भने खोप लगाएकाको मृत्युदर कम रहेको देखाएको छ । खोप मात्रा पूरा गरेपश्चात् मृत्युदर कम देखिएको विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएको छ ।
हाल, नेपालमा संक्रमणविरुद्ध कोभिडसिल्ड र भेरोसिल खोप प्रयोगमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकामा संक्रमण र मृत्यु भएको संख्या बढी छ ।
यसैगरी, सरकारले चीनबाट ल्याएको कोभिडविरुद्धको भेरोसिल खोप आगामी २५ जेठबाट लगाउन सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसपटक सो खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहकालाई दिइनेछ ।
यसअघि, भेरोसिल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहकालाई लगाइएको थियो । यसैबीच, बुधबार देशभर ५ हजार ३ सय १६ कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १३ हजार ८ सय ५ जनाको पीसीआर र ३ हजार ७३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । देशभर १ लाख १ हजार ९ सय ९३ संक्रमित छन् । जसमध्ये संस्थागतमा ६ हजार ८ सय ६२ र होम आइसोलेसनमा ९५ हजार १ सय ३१ जना संक्रमित रहेका छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ सय १ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बुधबार ७ हजार २ सय १९ जना संक्रमित निको भएका छन् । हाल, १ हजार ४ सय ४६ आईसीयू र ३ सय ८५ संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
प्रदेश १ मा २ सय ३२ आईसीयू र ६३ भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा १ सय १२ आईसीयू र २८ भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । बाग्मती प्रदेशमा ७ सय ९ आईसीयू र २ सय ३० जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा १ सय ३७ आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ६९ आईसीयू र २० भेन्टिलेटर, कर्णालीमा ४७ जना आईसीयू र ७ जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।